ကြှနျမလဲ ပွနျပွီး ငဲ့ကွညျ့ဖို့တနျဖိုးထားဖို့ထိုကျတနျခငျြပါတယျ – Shinyoon
ကြှနျမလဲ ပွနျပွီး ငဲ့ကွညျ့ဖို့တနျဖိုးထားဖို့ထိုကျတနျခငျြပါတယျ
ကိုယျအလေးထားသလောကျ ပွနျအလေးမထားတဲ့အရပျမှာနနေရေတာ တဈခါတဈလကြေ .. ကိုယျ့ကိုယျကို ဘာမှနျးမသိအောငျ ဖွဈလာတတျတယျ … ကြှနျမက ဘာလဲဆိုတဲ့မေးခှနျးမြိုး ကြှနျမကိုယျ ကြှနျမ မေးပွီး ကြှနျမမှာ ဆောကျတညျရာမရတှေ ဖွဈခဲ့တာလညျး အကွိမျကွိမျ အခါခါပါပဲ ။ လှညျ့ထှကျခဲ့လိုကျပါတဲ့ ကြှနျမ သိပါတယျ ။ ကြှနျမ မလုပျနိုငျသေးတာ ။
ကိုယျ့ဘကျက … အစဈအမှနျတှေ ပေးနပေါရဲ့နဲ့ တဈဖကျက ပွနျရလာတာတှကေ အပျေါယံတှပေဲ ဖွဈနတေဲ့အခါ တဈခါတဈလကေတြော့ ငိုခငျြတယျ ။ သကျရောကျမှုတိုငျးမှာ တနျပွနျသကျရောကျမှုရှိတယျဆိုပမေယျ့ ထပျတူညီတဲ့ တနျပွနျသကျရောကျမှုဖွဈဖို့တော့ မလှယျကူဘူးလေ ကိုယျပေးသလို ပွနျရခငျြမှ ရလာလိမျ့မယျ ကိုယျထားတဲ့စတေနာတှေ တနျဖိုးနားလညျခငျြမှ နားလညျလိမျ့မယျ ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈပါ ကိုယျပေးတဲ့စတေနာတှကေို တနျဖိုးလေး နားလညျစခေငျြတာတော့ အမှနျပဲ ။
ကြှနျမ … ဒီအရာကို ပေးပွီးသှားပွီ ပွနျရလာလိမျ့မယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ဘယျအရာကိုမှ မပေးခဲ့ဖူးဘူး မတ်ေတာပဲ ဖွဈဖွဈ စတေနာပဲဖွဈဖွဈ …ဘယျအရာကိုမဆို ကိုယျ့ဘကျက ပေးနိုငျတယျဆိုတာအရာတှေ မတှနျ့တိုပဲ ပေးခဲ့တာပါ … တဈဖကျက ကြိနျးသပွေနျရလာလိမျ့မယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကွီးနဲ့ကြှနျမ ပေးခဲ့တာမဟုတျဘူး . ပွနျပွီး မသိတတျခငျြနပေါ … ကိုယျပေးတဲ့အရာလေးတှကေို တနျဖိုးထားတတျစခေငျြတယျ ။
တဈခါတဈလမှော ကိုယျအဆငျပွနေလှေနျးလို့ကူညီပေးနတောမဟုတျဘူး ကိုယျအဆငျမပွတေဲ့ကွားက အဆငျပွပေါစဆေိုတဲ့စိတျနဲ့စာနာပေးခဲ့တာ … ဇာတျလမျးတှဆေုံးတော့ တကယျတမျးဒုက်ခတှနေဲ့ ကနျြခဲ့တဲ့သူက ကိုယျဖွဈနရေုံကလှဲလို့ဘာမှထပျပွီး ပိုမလာခဲ့ဘူး … နောငျတရတယျဆိုတာထကျ ၀မျးနညျးတာပါ ။
ကိုယျမြှျောလငျ့ထားတဲ့အတိုငျးဖွဈမလာတဲ့အခါ အနညျးနဲ့အမြားးတော့ ခံစားရတာတှခေညျြးပဲလေ … ကြှနျမမှာ ခံစားရတာတှမြေားလာတော့ … ကိုယျနဲ့မဆိုငျပါဘူးလဆေိုတဲ့အတှေးတှေးတတျခငျြလာတယျ … အဆငျပွသှေားမှာဆိုပွီး မကျြနှာလှဲတတျခငျြလာတယျ .. တကယျဆို ကြှနျမလဲ ပွနျပွီး ငဲ့ကွညျ့ဖို့တနျဖိုးထားဖို့ထိုကျတနျခငျြပါတယျ ။
ကိုယ်အလေးထားသလောက် ပြန်အလေးမထားတဲ့အရပ်မှာနေနေရတာ တစ်ခါတစ်လေကျ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာမှန်းမသိအောင် ဖြစ်လာတတ်တယ် … ကျွန်မက ဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုး ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ မေးပြီး ကျွန်မမှာ ဆောက်တည်ရာမရတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလည်း အကြိမ်ကြိမ် အခါခါပါပဲ ။ လှည့်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတဲ့ ကျွန်မ သိပါတယ် ။ ကျွန်မ မလုပ်နိုင်သေးတာ ။
ကိုယ့်ဘက်က … အစစ်အမှန်တွေ ပေးနေပါရဲ့နဲ့ တစ်ဖက်က ပြန်ရလာတာတွေက အပေါ်ယံတွေပဲ ဖြစ်နေတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ငိုချင်တယ် ။ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ထပ်တူညီတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုဖြစ်ဖို့တော့ မလွယ်ကူဘူးလေ ကိုယ်ပေးသလို ပြန်ရချင်မှ ရလာလိမ့်မယ် ကိုယ်ထားတဲ့စေတနာတွေ တန်ဖိုးနားလည်ချင်မှ နားလည်လိမ့်မယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကိုယ်ပေးတဲ့စေတနာတွေကို တန်ဖိုးလေး နားလည်စေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ ။
ကျွန်မ … ဒီအရာကို ပေးပြီးသွားပြီ ပြန်ရလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဘယ်အရာကိုမှ မပေးခဲ့ဖူးဘူး မေတ္တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ် …ဘယ်အရာကိုမဆို ကိုယ့်ဘက်က ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအရာတွေ မတွန့်တိုပဲ ပေးခဲ့တာပါ … တစ်ဖက်က ကျိန်းသေပြန်ရလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့ကျွန်မ ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး . ပြန်ပြီး မသိတတ်ချင်နေပါ … ကိုယ်ပေးတဲ့အရာလေးတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်စေချင်တယ် ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်အဆင်ပြေနေလွန်းလို့ကူညီပေးနေတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်အဆင်မပြေတဲ့ကြားက အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စာနာပေးခဲ့တာ … ဇာတ်လမ်းတွေဆုံးတော့ တကယ်တမ်းဒုက္ခတွေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့သူက ကိုယ်ဖြစ်နေရုံကလွဲလို့ဘာမှထပ်ပြီး ပိုမလာခဲ့ဘူး … နောင်တရတယ်ဆိုတာထက် ၀မ်းနည်းတာပါ ။
ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများးတော့ ခံစားရတာတွေချည်းပဲလေ … ကျွန်မမှာ ခံစားရတာတွေများလာတော့ … ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေဆိုတဲ့အတွေးတွေးတတ်ချင်လာတယ် … အဆင်ပြေသွားမှာဆိုပြီး မျက်နှာလွဲတတ်ချင်လာတယ် .. တကယ်ဆို ကျွန်မလဲ ပြန်ပြီး ငဲ့ကြည့်ဖို့တန်ဖိုးထားဖို့ထိုက်တန်ချင်ပါတယ် ။
ကိုယျ့ဘကျက လှတျခရြဲတဲ့ သတ်တိလေးလိုတယျ